Baadari Mareykan Ah Oo Si Yaab leh Lacago Uga Dalbaday Dadka Raacsan Kaniisaddiisa.
Thursday May 31, 2018 - 05:41:43 in Wararka by Super Admin
Wadanka Mareykanka waxaa laga hadal hayaa qisada Baadari tuug ah oo lacag malaayiin dollar ah ka dalbaday taageerayaashiisa.
isagoo hadlayay ayuu yiri "Alle ayaa igu armray in aad ii iibisaan diyaarad nuuceedu yahay Falcon7X".
Ninkan beenaalaha ah oo iska dhigayay in uu yahay Nabi ayaa isagoo qiil uraadsanaya in loo iibiyo diyaaradda wuxuu hadalkiisa sii raaciyay "alle wuxuu ifaray in aad iga bixisaan lacag 54 Milyan oo dollar ah markii hore waan ka labalabeynayay in aan diyaarad iibsado balse amarka alle ayaa ii yimid"!
Dad badan oo American ah ayaa durbadiiba bilaabay in ay lacago iska aruuriyaan balse qaar kamid ah taageerayaasha Baadari Gibsi Doblantis ayaa baraha bulshada ku faafiyay jawaab celinno jees jees ah oo ay ku sheegayaan in Ninkan uu yahay tuug doonaya in uu hanti badan ka dhurto dadka isaga indha la'aanta ah u taageersan.
Baadarigan ayaa sanaddii 2015 Baraha bulshada ku faafiyay Video isagoo hareer taagan mid kamida diyaaradahiisa oo gaboowday wuxuuna ku safridda gawaarida,tareennada iyo diyaaradaha ganacsiga ku sifeeyay "Tubbooyinka sheydaanka".
Ciidamo Mareykan ah oo Burburiyay Guryo kuyaal deegaanka Hantiwadaag Ee Sh/Hoose.